Sifaan Bari sitti himani ofbari Oromia Shall be Free - Oromia Shall be Free
Sifaan Bari sitti himani ofbari
bilisummaa June 8, 2014	Comments Off on Sifaan Bari sitti himani ofbari
Kansera bilisummaa fira dina gurgutuu mirgaa nama
ILmaan Goobanaa fi OPDO . kana dubbisaa! ‘Share’
ykn ‘print’ gochuudhaan oromoo hunda bira
akka ga’u godhaa
XUMURA OROMOO ORMA JALA FIIGANII
GORSA KALLATTII OROMUMMAA
1) Barichi walakkeessa jaarraa kudha
saddeettaffaa booda ture, yeroo kana
yeroo jalqabaaf oromummaa ala saggaaruu
jalqabe. Yeroo jalqabaafis oromoo dhiisee
ofitti aanse. Yeroo jalqabaafis oromoon orma
irra goree oromoo lole. Sababa kanaan sabni
guddan kuni WARAABESSA GABRUMMAA b
baraan lafee, foonii fi dhiiga keenya sooratu,
gaafa fedhes lubbuu keenya fudhatu jalatti
kufne. Cimaa oromootu isaan garaaree nu
cabse. Oromoon kuni goota oromoo cimaa
ture, GOOBANAA DAANCEE jedhama.
Goobanaan oolmaa guddaa isaan biraa qaba.
Waadaa orma wajjin walii gale
qabu hundumaan lammii isaa ciree cirsiisee
oromiyaan harka ormaa galte. Waan harki
hojjeteen, Lammiin isaa kunoo hamma
harka ormaatti rakkata. Kunoo amma
duunis nurraa hin dhaabbanne. Kunoo harka
diinaatiin hoggayyuu hurgufama. Hiraarfama!
Lammiin lammii akkas godhe ofiimmoo
ta’e laata? Cimaan keenyi utuu hin
hammate,boofa mudhiitti marate. Ormi
oromiyaan harkasaa galuu mirkaneeffateen
,abbaa oolmaa isaanii kan namni namaa hin
oole ooleefii,nama isaan amanee biyya abbaa
isaa dabarsee kenneefii,nama isaan amanee
dhiiga oboleessa isaa dhangalaasee mootii
isaan taasise amanuu dadhabanii,utuu oolanii
hin buliin ATI UTUU KAN BIRAA ARGITEE
IMMOO UNUUN NUGURGURTA ittiin jedhan.
KAN WARRA IRRAA DHALATTEEF HIN
AMANAMNE UNUUF HIN AMANAMTU ittiin
jedhan. GOOBANAAN gaafa waan abdate
dhabu,waaqaaf lafa isa fudhatu dhabe.
Haamileen isaa cabee jiraatti du’ee. Waanti
godhe waan gaafa gaabban deebisan miti.
Hadoodee garatti deebi’u wallaale. Faayidaaf
jedhee waan inni lammiisaa godhe waan
arganiifis,tasgabbiin booda isaan birattis
jibbame. Ormi mootii nurratti ta’e waggaa
shaniif sirriitti tasgabbaa’ee booda shakkii
guddina abbaa oolmaa isaanii ajjeesani!
Goobanaan dhumnisaa salphina hin darbine
Kan nama gaddisiisu,du’uusaa utuu hin
ta’iin,du’ees baraa baratti abaaramaa hafuu
isaati. kan hin jiraanneef sanyiisaa jireenya
harkaa gate deeme. Qananii nurraa baasee
qaanii nutti uwwisee sokke.Karaa warri
jaarraa heddu ijaare Diinatti agarsiisee nu
diigsise! Icitii jabina keenyaa ormatti
sirna keenya cabse. Kanaaf amma har’aatti
karaan nuharkaa bade lafa yaadnu gahuu
dadhabne. Kanaaf sirni ormaa nurratti
Kunoo akkasitti hiree keenya cabsee, hiraara
baachisee,jaarraa tokkoo oliif jalarra nu
deemsise. Ilaali lammiikoo,akkasittiin cabnee,
akka midhaan kadhattuu walkeessa facane.
keessa taa’anii,waa’ee eenyummaa keenyaa
nuti ijaarru,isaan nu jala deemanii diigu. Isa
hiikne guduunfu. Isa nuti baasnu owwaalu.
Dubbii oromummaa keenyaa isa nuti
qulqullessinu isaan nujala deemanii dhoqqee
dibu. Oromoo tokkomsuuf yoo nuti fala
himne,isaanimmoo dammaan makanii faallaa
himu. “ Gaafa isaan oromiyaa seenan gobaatu
jilba nu seene.” Yeroo kanatti hojii oromoo
hojjechuu jechuun kana hunda obsuu jechuu
dha. Haa ta’uutii akkuma kan biyya ajjeesu
kan biyyaaf du’u jira.GALANNI ISAANII HIN
BADIIN! Garuu kennaaan oromoof
seenaa bade kana mara deebisu ,kan qaanii
nurraa darbee qananii nutti uwwisu,kan
bulchinsa ormaa cabsee sirna keenya
deebisu,kan lammii bool’aa baasee gita
deemsisu,kan gabrummaa nurraa cabsee
biyyasaa bilisoomsu,maqaasaa olqabee
dhaabee Goobanaa dagachiisu,EENYU
……………kan asitti barreeffamu,maqaa nama
dhugaamoo ammas maqaa nama gantuuti?
Maqaa nama tokkoomoo maqaa nama
kumaati? Ani hin beeku yaa waaq situ beeka.
Kum kumiyyuu haa hafu,garuu bilisoomuun
oromoo hin hafiin!!
2)Bara lola Xaaliyaanii fi Itiyoopiyaa
biyya humnaan harmaa fi harka kutee,saba
nagaan jiraatu fixee,lafee namaa cabsee,
namaa cobsee ijaarrate utuu irraa nyaatee
quufiin waanti hin yaadamiin Mosolooniim
Previous Ethiopia: Has the Government suspended Mayor of Addis Ababa?
Next Oromo Liberation Front (OLF)